Buy Unisex သည်ကိုယ်ခန္ဓာအနံ့နှင့်ချွေးထွက် Deodor Perfume ရေမှုတ်ဆေးကို - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်းလွတ်ခွင့် WoopShop®
Unisex သည်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ချွေးစွမ်းအင်သုံးရေမွှေးများကိုဖယ်ရှားပေးပါသည် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ထုတ်လုပ်မှုလိုင်စင်: Yue makeup20160535
အကျိုးသက်ရောက်မှု - ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖယ်ရှားပေးသည်၊ ကြာရှည်သောမွှေးကြိုင်သောအရာ၊ လက်ကြားဆေးအနံ့ကိုဖယ်ရှားပေးသည်
ဆောင်ပုဒ်: လတ်ဆတ်သောနှင့်စိုထိုင်းသော, အဆင်ပြေခြင်းနှင့်သာယာသော
ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ - အနံ့လတ်ဆတ်သော Hamamelis Virginiana ထုတ်ယူမှုပါ ၀ င်သည့်အပြင်အသားအရေကြည်လင်ပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။ လတ်ဆတ်။ မညစ်ပတ်ပေ။ အနံ့များ၊ ချွေးထွက်ဆေးကြောနိုင်သည်။ , အဆင်ပြေ, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်သို့မဟုတ်ဒုက္ခမရှိ, ဒုက္ခနှင့်ကြော့ရှင်းကယ်တင်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: ရေ, Aluminium Chlorohydrate, Butylene Glycol, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) အရွက်ထုတ်ယူ, Diazolidinyl Urea, Methylparaben
အရေပြားမှ ၅ စင်တီမီတာခန့်အကွာရှိသန့်ရှင်းသောအရသာရှိသောရေကိုယူပြီးသင့်တော်သောပမာဏကိုအရေပြားပေါ်တွင်အသုံးပြုပါ။
23 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
оченьпонравилось။ реальнопомогает။ неожидала။ однозначнорекомендуюкпокупке
ကုန်ပစ္စည်းများကို ၄၈ ရက်အတွင်း Podolsk သို့တင်ပို့သည်။ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်။ ကောင်းစွာထုပ်ပိုး ဖော်ပြချက်ကိုက်ညီ။ ဒုတိယအကြိမ်အမှာစာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရောင်းသူ!
စိန့်ပီတာစဘတ်ကို ၆၁ ရက်ကြာရောက်ခဲ့သည်။ ငါအဲဒါကိုရဖို့မျှော်လင့်မထားခဲ့ဘူး။ နှစ်သစ်ကူးအကြိုဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင်ရောက်လာသည်။ အနံ့သည်မွှေးကြိုင်။ မုန်းတီးသည်။
ငါရေမှုန်ရေမွှားအရမ်းကြိုက်တယ်။ အဆိုပါမှုတ်လိမ်းတစ်နေ့လုံးအဘို့လတ်ဆတ်တဲ့ခံစားချက်ဖန်တီးသူ့ဟာသူပြသထားတယ်။ မှုန်ရေမွှားအရေပြားရှူရှိုက်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဥပမာ - ခြေထောက်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်အကြိုက်ဆုံးစနီကာများမချမီသင်၏ခြေထောက်ပေါ်ရေဖြန်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မလုံလောက်ပါကအလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲသော်လည်းစီးပွားရေးအရကုန်ဆုံးသည်။ ငါကြိုးစားရန်အကြံပြုပါသည်
ဖောက်သည် 5.0 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကို5/ 73842 ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။